शशांकले दाबी छाडेसँगै पौडेल साझा उम्मेदवार बन्ने सम्भावना बढ्दो - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
शशांकले दाबी छाडेसँगै पौडेल साझा उम्मेदवार बन्ने सम्भावना बढ्दो
नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा सभापति इतर समूहबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सभापतिको साझा उम्मेदवार बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
मंगलबार गणेशमान भवन चाक्सीबारीमा बसेको पौडेल पक्षीय नेताहरुको बैठकमा सभापतिका आकांक्षी मध्येका एक महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पौडेललाई समर्थन जनाउँदै आफ्नो दाबेदारी फिर्ता लिएका छन् ।
कोइरालाले बैठकमा पौडेल सबैभन्दा सिनियर नेता भन्दै साझा उम्मेदवार बनाएर महाधिवेशनमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । कोइरालाको यो प्रस्तावपछि पौडेलको नेतृत्वमा इतर समूह महाधिवेशनमा जाने सम्भावना बढेको हो ।
मंगलबार नै साझा उम्मेदवारको टुंगो लगाउने भनिए पनि टुंगो भने लागेको छैन । सभापतिका आकांक्षी पौडेल, प्रकाशमान सिंह र डा. शेखर कोइरालाबीच बुधबार बिहान छलफल गरेर टिम घोषणा गर्ने तयारी भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले उम्मेदवारीका विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताएका छन् । उनले बुधबार बिहान ९ बजे फेरि छलफल गरेर सबै टुंगो लगाउने बताए ।
चाक्सीबारीमा नेताहरुको छलफल चलिरहँदा युवाहरुले साझा उम्मेदवार तय गर्न भन्दै प्लेकार्ड बोकेर दबाब दिएका थिए।
देशका ६ वटा प्रदेशमा सम्पन्न भएको प्रदेश अधिवेशनको परिणााम इतर पक्षले सोचे जस्तो नआएपछि एकजुट हुनुपर्ने दबाब बढेको छ । त्यसमाथि सभापतिका आकांक्षी शेखर कोइराला र प्रकाशमानको प्रदेशमा देउवा समूहले जित हात पारेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलकै नेतृत्वमा जानुपर्ने दबाबसमेत बढेको छ ।
६ प्रदेश मध्ये इतर समूहले गण्डकी र लुम्बिनीमामात्र जित हात पारेको छ । ४ प्रदेशमा देउवा समूहले जित हात पारेको छ ।